Lynda ANDRIATSITONTA MPE, tetikasa AMPIANA	0 Commentaire juil 24, 2018
80 % ny mpivarotra trondro eny ambony latabatra na an-kalamanjana mbola tsy manara-dalàna. Nambaran’ny talem-paritry ny harena anaty rano sy ny jono, Tahiana Rasoamananjara fa mangataka fahazoan-dalana any amin’ny ministeran’ny harena anaty rano sy ny jono na ny foibem-paritra raha hivarotra trondro. Saro-pady ny trondro ka mila fitandremana sy fahaizana mikarakara mba tsy hiteraka fahapoizinana ara-tsakafo. Laharam-pamehana amin’izany ny fitandroana ny fahadiovana. Maimaim-poana ny fikarakarana ny antontan-taratasy fahazoan-dalana, raha ny fanazavana voaray.
Mpivarotra trondro an-dranomamy miisa enina no hahazo ny fitaovana hanatsaràna ny kalitaon’ny trondro varotan’izy ireo. Tanjon’ny tetikasa AMPIANA ny hanatsaràna ny kalitaon’ny trondro hohanin’ny mpanjifa. Miara-miasa amin’ny MPE (Malagasy Professionnel d’Elevage) ny tetikasa ary ny vondrona eraopeaninina no mamatsy vola. Elobe, “bidon en robinet”, latabatra fivarotana ireo fitaovana omen any mpivarotra eto Analamanga. Ho fiarovana ny trondro amin’ny herin’ny masoandro, hikajiana ny fahadiovana ireto fahadiovana ireto. Mbola andrana ihany ny fizaràna ireto fitaovana manara-penitra ireto. Nandalo fiofanana momba ny fahadiovana ihany koa ireo mpivarotra mpahazo tombontsoa, araka ny fanazavan’ny lehiben’ny tetikasa AMPIANA, Rija Randriamarolaza.
‹ FANDRINDRAM-PIAINAM-PIANAKAVIANA: Tonga indray ny vazaha	› MPAMPIANATRA MITOKONA: Any amin’ny Mailhol ny vahaolana maharitra